Nyefee nke ịrụ | Law & More B.V. | Mba netherland
blog » Nyefee nke ịrụ
Nyefee nke ịrụ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịnyefe ụlọ ọrụ na onye ọzọ ma ọ bụ iweghara ụlọ ọrụ onye ọzọ, ị nwere ike ịjụ ma nchịkwa a ọ metụtara ndị ọrụ. Dabere na ihe kpatara eji were ụlọ ọrụ ahụ na etu esi eweghara ụlọ ọrụ, nke a nwere ike ọ gaghị amasị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ otu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-enwechaghị ahụmahụ na azụmaahịa dị otú ahụ weghaara ya? N'ọnọdụ ahụ, ọ ga-adị mma iweghara ndị ọrụ pụrụ iche ma hapụ ha ka ha na-arụ ọrụ ha. N'aka nke ọzọ, enwere njikọ nke ụlọ ọrụ abụọ yiri ya iji chekwaa ụgwọ? Mgbe ụfọdụ ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike bụrụ ihe na-adịchaghị mma, n'ihi na ụfọdụ ọnọdụ emejuola ma enwere ike ịchekwa ego na ụgwọ ọrụ. Ma ndị ọrụ a ga-ewere ọrụ ha dabere na itinye ụkpụrụ a n'ọrụ na 'mbufe nke ọrụ'. N’isiokwu a, anyị na-akọwa mgbe nke a bụ eziokwu na ihe nsonazụ ya bụ.
Kedu mgbe enwere mbufe nke ọrụ?
Mgbe enwere mbufe nke oru sitere na Nkebi 7: 662 nke Dutch Civil Code. Akụkụ a na-ekwu na a ga-enwerịrị nnyefe n'ihi nkwekọrịta, njikọ ma ọ bụ nkewa nke ngalaba akụ na ụba na na-ejide ya njirimara. Otu akụ na ụba bụ "otu akụnụba ahaziri ahazi, raara onwe ya nye ịchụso ọrụ akụ na ụba, ma ọrụ a bụ isi ma ọ bụ na ọ bụ". Ebe ọ bụ na ewepụrụ ndị na-ewepụ ihe n'ụzọ dị iche iche na omume, nkọwa iwu a anaghị enye ụkpụrụ doro anya. Nkọwa ya dabara nke ọma dabere n'ọnọdụ nke ikpe ahụ.
Ndị ọka ikpe sara mbara na nkọwa ha maka ịnyefe ọrụ dịka usoro iwu anyị siri dị mkpa maka nchekwa ndị ọrụ. Dabere na iwu ikpe dị ugbu a, enwere ike kwubie na okwu ikpeazụ 'otu akụ na ụba na-ejigide njirimara ya' bụ nke kachasị mkpa. Nke a na-emetụtakarị iwepụ akụkụ nke ụlọ ọrụ na akụ ndị metụtara ya, aha azụmaahịa, nchịkwa na, n'ezie, ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu akụkụ nke ihe a metụtara, a naghị enyefe ọrụ, ọ gwụla ma akụkụ a bụ mkpebi maka njirimara nke ọrụ ahụ.
Na nkenke, a na-enwekarị mbufe nke ọrụ ozugbo iwere ọrụ gụnyere akụkụ zuru oke nke ọrụ ebumnuche nke ịrụ ọrụ akụ na ụba, nke a na-ejikwa njirimara nke ya ejidere mgbe ewechara ya. Yabụ, ịnyefe azụmaahịa (akụkụ nke) azụmahịa na agwa na-abụghị nwa oge ga-abụ nyefe ọrụ. Okwu nke enweghị nnyefe ọrụ ọ bụla bụ njikọta njikọ. N'ọnọdụ dị otú a, ndị ọrụ ahụ na-anọgide na-arụ ọrụ nke otu ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ọ bụ naanị mgbanwe na njirimara nke ndị nwe (s).
Nsonaazụ nke mbufe nke ọrụ
Ọ bụrụ na enwere mbufe nke ịmalite ọrụ, n'ụkpụrụ, ndị ọrụ niile na-abụ akụkụ nke ọrụ akụ na ụba na-ebufe n'okpuru ọnọdụ nke nkwekọrịta ọrụ yana nkwekọrịta mkpokọta dị ike na onye were ọrụ gara aga. Ya mere, ọ dịghị mkpa iji mechie nkwekọrịta ọrụ ọhụụ. Nke a metụtakwara ma ọ bụrụ na ndị otu ahụ amaghị maka ntinye nke mbufe na maka ndị ọrụ nke onye na-ebugharị amabeghị n'oge oge iwe. A naghị ekwe onye ọrụ ọhụụ ahụ ka ọ chụọ ndị ọrụ ahụ n'ihi nnyefe nke ọrụ. Ọzọkwa, onye were gị n’ọrụ oge gara aga ga-akwụ ụgwọ ya na onye were ya n’ọrụ ọhụrụ maka otu afọ maka imezu ọrụ ndị sitere na nkwekọrịta ọrụ ahụ bilitere tupu mbufe ọrụ ahụ.
Ọ bụghị ọnọdụ ọrụ niile ka a na-enyefe onye ọrụ ọhụrụ ahụ. Atụmatụ ezumike nka bụ ihe ọzọ na nke a. Nke a pụtara na onye were gị n’ọrụ nwere ike itinye ụdị atụmatụ ezumike nka ahụ nye ndị ọrụ ọhụụ dịka ọ na-eme ndị ọrụ ugbu a ma ọ bụrụ na ekwuputara oge maka mbufe ahụ. Nsonaazụ ndị a metụtara ndị ọrụ niile ndị ụlọ ọrụ na-ebufe na-arụ ọrụ n'oge mbufe. Nke a metụtakwara ndị ọrụ na-erughị eru maka ọrụ, na-arịa ọrịa ma ọ bụ na nkwekọrịta nwa oge. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ achọghị ịnyefe ya na ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike kwupụta hoo haa na ọ chọrọ ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ ahụ. O kwere omume ikwurita banyere onodu oru mgbe mbufechara ulo oru. Agbanyeghị, a ga-ebu ụzọ nyefee onye ọrụ ọhụrụ ọhụụ ọnọdụ ọrụ ochie ochie tupu nke a enwee ike.
Isiokwu a na-akọwa na nkọwapụta iwu nke mbufe nke ọrụ a na-emezu n'oge na-adịghị anya na nke a nwere nnukwu nsonaazụ gbasara ọrụ ndị ọrụ nke ọrụ ahụ. Nyefee nke ọrụ bụ ya bụ ikpe ahụ mgbe onye ọzọ weghaara ngalaba akụ na ụba nke ụlọ ọrụ maka oge na-abụghị nwa oge, nke ga-echekwa njirimara nke ọrụ ahụ. N'ihi usoro iwu na mbufe nke ọrụ, onye na-eweghara ọrụ ga-ewe ndị ọrụ nke (akụkụ nke) ọrụ ebugharị n'okpuru ọnọdụ ọrụ ndị metụtara ha. Achọpụtaghị onye ọrụ ọhụụ ịhapụ ndị ọrụ ya n'ihi nnyefe nke ọrụ ahụ. Youchọrọ ịmatakwu banyere mbufe nke ọrụ na ma iwu a metụtara ọnọdụ gị kpọmkwem? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na iwu ụlọ ọrụ na iwu ọrụ ma nwee obi ụtọ inyere gị aka!
Previous Post Nkwekọrịta ikike
Next Post Nye onyinye: Gịnị dị mkpa ka ị mara?